के मधुमेहले वजन घटाउन रोक्छ वा रोक्छ? - कल्याण | सेप्टेम्बर 2021
समुदाय औषधि जानकारी, समाचार समाचार औषधि बनाम मित्र औषधि जानकारी कम्पनी, स्वास्थ्य शिक्षा समुदाय, कम्पनी औषधि जानकारी, स्वास्थ्य शिक्षा मनोरञ्जन कम्पनी, चेकआउट खेलहरु स्वास्थ्य शिक्षा, कल्याण कम्पनी, औषधि जानकारी स्वास्थ्य शिक्षा, घरपालुवा जनावर घरपालुवा जनावर
मुख्य >> कल्याण >> के मधुमेहले वजन घटाउन रोक्छ वा रोक्छ?
के मधुमेहले वजन घटाउन रोक्छ वा रोक्छ?
धेरै जसो अवस्थाहरूमा, मधुमेह रोक्न र ब्यवस्थापन गर्ने तरिकाहरूको सूचीमा वजन घटाउन उच्च छ। वजन कम गर्नाले हृदय स्वास्थ्य सुधार गर्दछ, उच्च रक्तचाप को जोखिम कम गर्दछ, रगत ग्लुकोजको स्तर कायम गर्दछ, इन्सुलिन प्रतिरोध कटौती, र अधिक। तर कहिलेकाँही, मुख्यतया टाइप १ मधुमेहको मामिलामा, तौल घटाउने अप्रत्याशित, असामान्य र चिन्ताको कारण हुन सक्छ। भाग्यवस, कसरी मधुमेहले वजन घटाउन सक्छ भन्ने थाहा पाउँदा के खोज्ने, र कहिले स्वास्थ्य सेवा प्रदायकलाई भेट्ने रोगको प्रबन्ध गर्न र स्वस्थ रहनको लागि लामो यात्रा गर्न सक्दछ।
के मधुमेहले वजन घटाउन सक्छ?
हो, यो सक्छ। मेलिटस मधुमेह शरीरको उत्पादन र / वा यसको इन्सुलिनको प्रतिक्रिया कम गर्दछ — हर्मोन जसले शरीरमा ग्लूकोजलाई ऊर्जामा रूपान्तरण गरी रगतमा चिनीको स्तर नियन्त्रण गर्दछ। यदि कक्षहरूले यस रूपान्तरण गर्न पर्याप्त ईन्सुलिन सिर्जना गर्न वा प्रयोग गर्न सक्दैनन् भने, तिनीहरूले सोच्न सक्छन् कि शरीर भोक भोकभोकै छ र उर्जाको लागि मांसपेशी र शरीरको बोसो खपत गर्न थाल्छ, अचानक वजन कम भएमा। धेरै जसो समय, यो टाइप १ डायबेटिसको मामिलामा देखा पर्दछ, यद्यपि टाइप २ डायबिटीजले पनि अस्पष्टीकृत वजन घटाउन सक्छ।
जो कोही वजन घटाउन कन्सर्ट गरिएको प्रयास गरिरहेको छैन तर अझै पनि लगातार ड्रपहरू देख्दछ जब स्केलमा उभिनु भयो नोट लिनु पर्छ। यस प्रकारको अस्पष्ट वजन घटाउने निदान डायबेटिसको संकेत हुन सक्छ। यो थाइरोइड मुद्दाहरू, celiac रोग, Crohn रोग, क्यान्सर, र अधिक सहित अन्य शर्तहरु को एक मेजमान देखि हुन सक्छ। निश्चित रूपमा थाहा पाउनको लागि एक मात्र तरीका भनेको स्वास्थ्य सेवा प्रदायकको भ्रमण गर्नु हो।
अध्ययनहरूले देखाए कि केहि मधुमेह उपचार, जस्तै metformin , पनि सक्छु कारण र वजन वजन कायम राख्न मद्दत गर्दछ धेरै वर्ष भन्दा बढी। अन्य मधुमेह औषधिहरू जो भोक कम गर्न सक्छ र वजन घटाउन सक्छ ब्याएटा र भिक्टोजा समावेश गर्दछ।
जब एक स्वास्थ्य सेवा प्रदायक हेर्न को लागी
कहिलेकाँही, शरीरको तौल स्वाभाविक रूपले उतारचढाव हुन सक्छ, त्यसोभए कसैलाई कहिले चिन्ता गर्नुपर्छ? सामान्य सहमति छ कि छ महिना देखि १२ महिनाको अवधिको भन्दा शरीरको तौलमा अनजाने 5% वा बढी घटाइ असामान्य हो।
कति पटक तपाइँ योजना बी गोली लिन सक्नुहुन्छ
आरडीका सीईओ लिसा मोसकोभिट्जले भने, अचानक वजन घटाउनु रक्त ग्लूकोजको बढ्दो वा अनियन्त्रित संकेतको संकेत हुन सक्छ। NY पोषण समूह । होस् वा नहोस् तपाईंले जानाजानी तौल घटाउँदै हुनुहुन्छ, हप्तामा दुई वा तीन पाउन्ड भन्दा बढीको नोक्सान तपाईंको स्वास्थ्य सेवा प्रदायकलाई रिपोर्ट गर्नुपर्छ।
फ्लिप पक्षमा, मोटोपना टाइप २ मधुमेह को लागी एक महत्वपूर्ण जोखिम कारक हो। Or० वा अधिकको बडी मास इंडेक्स (BMI) भएका व्यक्तिहरूसँग इन्सुलिन प्रतिरोधको उच्च स्तर हुन्छ, सम्भवतः टाइप २ मधुमेह निम्त्याउँछ। मोटाईको प्रत्येक केसले मधुमेह निम्त्याउँदैन, तर यसले निश्चित रूपमा यसलाई विकास गर्ने सम्भावना बढाउँदछ। त्यसमाथि, मोटोपनाले मधुमेह लक्षणहरूलाई बढवा दिन सक्छ जो पहिले नै यो भएको छ।
यस कारणका लागि, स्वास्थ्य सेवा प्रदायकहरू र डाएटियनहरूले प्राय: मधुमेह वा प्रेबिडियटिस बिरामीहरूका लागि डाइट वा वजन घटाउने कार्यक्रमहरू विकास गर्दछन्। यी कार्यक्रमहरूमा अक्सर खाना योजनाहरू र शारीरिक गतिविधि दिनचर्या समावेश गर्दछ जसले बिरामीहरूलाई स्वस्थ तौल प्राप्त गर्न र कायम राख्न मद्दत गर्दछ, टाइप २ मधुमेहको जोखिम वा गम्भीरतालाई कम गर्दछ। सामान्यतया यसमा बिरामीको हालको खाने र व्यायाम बानीहरूको विश्लेषण गर्नु समावेश हुन्छ, त्यसपछि व्यावहारिक जीवनशैली परिवर्तनहरू राख्नु जुन व्यक्तिगत वजन घटाउने लक्ष्यहरू प्राप्त गर्न मद्दत गर्दछ।
सम्बन्धित: अधिक वजन र मोटाई तथ्या .्क
कसरीसुरक्षितवजन कम जब तपाइँ मधुमेह है
यद्यपि मधुमेह भएका मानिसहरूले अचानक, अव्यवस्थित वजन घटाउन सक्दछन्, तर यो सब भन्दा साधारण परिणाम होईन। यो मुख्यतया टाइप १ मधुमेह केसहरूमा देखा पर्दछ, जुन केवल समावेश गर्दछ %% देखि १०% सबै मधुमेह रोग को। प्राय: जसो यो उल्टो हुन्छ - वजन घटाउनु भनेको संघर्ष गर्नु हो। इन्सुलिन प्रतिरोधले उच्च इन्सुलिन स्तरतर्फ डो .्याउँछ, जसले भोक र बढुवा बढाउन सक्छ। र इन्सुलिन थेरापीको बखत शरीरले ग्लुकोज बोसोको रूपमा बढी भण्डार गर्दछ। दुबै स्थितिले तौल बढाउन को लागी वा कम्तिमा पनि तौल प्रबन्धन संग बढी कठिनाई ल्याउन सक्छ।
मुखमा बाक्लो लालाको कारण के हो?
जबकि टाइप २ मधुमेह को लागी कुनै उपचार छैन, डाइटिंग र शारीरिक गतिविधि मार्फत निरन्तर वजन घटाउँदा यसले उल्टाउन सक्दछ (वास्तविक रकम आवश्यक वजनको फरक हुन्छ)। यसको मतलब यो होइन कि मधुमेह सदाको लागि गयो। यसको सीधा मतलब यो हो कि रोग माफीमा छ, र बिरामीले हेरचाह गर्दैछ स्वस्थ रगतमा चिनी स्तर , तर लक्षणहरू जहिले पनि फर्किन सक्दछ।
सबैभन्दा ठूलो प्रश्न यो हो: यदि तपाईलाई मधुमेह छ भने वजन कम गर्ने सब भन्दा उत्तम र सुरक्षित तरिका के हो? त्यहाँ धेरै फ्याड डाईटहरू छन् जुन स्वस्थ छैनन्। निश्चित छ, एक हप्ता को लागी गाजर को रस मात्र केहि पनी शायद वजन कम गर्न मद्दत गर्दछ, तर यो शायद लामो समय मा स्वस्थ विकल्प छैन। यो एक व्यक्तिगत, राम्रो राउन्ड आहार खान, भागहरू प्रबन्ध गर्न, र नियमित रूपमा व्यायाम गर्नु राम्रो हुन्छ। यहाँ केहि मधुमेह वजन घटाउने विकल्पहरू छन् जुन बढी प्रभावकारी हुन सक्छ:
कम क्यालोरी आहार: यो समय परीक्षण गरिएको वजन घटाउने दृष्टिकोण हो। दिन पछि क्यालोरी घाटाले तौल घटाउनेछ। सामान्यतया, यसले क्यालोरिक सेवन पुरुषको लागि १,२०० देखि १6०० दिन र महिलाको लागि १,००० देखि १,२०० सम्म सीमित गर्दछ। तर यो सही क्यालोरी खाने बारेमा पनि छ - पर्याप्त तरकारी, फलफूल, प्रोटीन, र कार्बोहाइड्रेटको साथ सन्तुलित आहार। अमेरिकाको अध्ययन टाइप २ मधुमेह भएका of 45.%% ले देखाए कि कम क्यालोरी तौल प्रबन्धन कार्यक्रममा भाग लिएकाहरूले एक बर्ष भित्र माफी प्राप्त गरे।
धेरै कम क्यालोरी आहार (VLCDs): VLCD हरू भर्खरको प्रवृत्ति हो बिरामीलाई प्रति दिन 800०० भन्दा कम क्यालोरीमा सीमित गर्दछ। यो गाह्रो छ, तर भित्र एक २०१ study अध्ययन , प्रति दिन VLCD भन्दा कम 600००-क्यालोरीमा मधुमेह बिरामीहरूले केवल दुई हप्तामा ग्लाइसेमिक नियन्त्रणमा द्रुत सुधार देखाए र%%% ले आठदेखि १२ हप्तामा छुट पाए।
केहि खानाहरू बेवास्ता गर्दै: विशेष रूपमा, स्वास्थ्यसेवा प्रदायकहरूले प्रशोधन गरिएको अन्न, पूर्ण बोसोयुक्त डेअरी उत्पादनहरू, सन्तृप्त वा ट्रान्स फ्याटको मात्रामा अधिक खाद्य पदार्थ, र थपिएको चिनी वा मिठाईको खानाहरू घटाउने वा काट्न सिफारिस गर्न सक्दछन्। यी खाद्य पदार्थहरूले रगतमा चिनीमा स्पाइक्स निम्त्याउन सक्छ र फ्याट सेवन बढाउँदछ।
भाग नियन्त्रण: यो एक धेरै आत्म व्याख्यात्मक छ। अधिक खानेले तौल बढ्न सक्छ, जो मधुमेह हेरचाहको लागि हानिकारक हो। बिरामीहरूलाई ट्र्याकमा राख्न मद्दत गर्न, डाईटियनहरू स्वस्थ खाना बानीहरू सिकाउने क्रममा चिनी र फ्यात्त सेवन कम गर्न सन्तुलित भोजन योजना बनाउँदछन्।
नियमित व्यायाम: व्यायाम रगत शुगर कम र एक कसरत पछि २ hours घण्टा सम्म इन्सुलिन संवेदनशीलता बढाउन सक्छ। जहाँसम्म, यो कसरतको तीव्रता र अवधिमा निर्भर गर्दछ, को अनुसार अमेरिकी मधुमेह संघ (एडीए) । स्वास्थ्य सेवा प्रदायकहरूले मधुमेहको उपचार गर्दा बिरामीको खाना योजनासँग जोडी गर्न व्यायाम गर्ने तालिका सिर्जना गर्न सक्दछन्।
त्योले भन्यो, मधुमेहले खानासँगको एउटाको सम्बन्धलाई तहसनहस पार्न सक्छ, मोस्कोभित्ज भन्छ। यो अनियोजित खाने बान्की वा यो पनि विकसित गर्न असाधारण छैन निदान पछि खाने विकारहरू । त्यस कारणका लागि, एक व्यक्तिगत, लचिलो, र समावेशी दृष्टिकोण जुन व्यक्तिको आवश्यकता र जीवनशैली मिल्छ, दीर्घकालीन सफलताको लागि सर्वोपरि हो।
मोस्कोभिट्जले बोटमा आधारित र फाइबरयुक्त फूडहरू, दुबै प्रोटिनहरू र एन्टी-इन्फ्लेमेटरी फ्याटहरूको साथ कम ग्लाइसेमिक डाईट सिफारिश गर्छ, [जुन] उत्तम उपचार हो। हीमोग्लोबिन A1C नियमित गर्नुहोस् , तीन महिनाको अवधिमा औसत रगतमा चिनी। उनी सल्लाह दिन्छिन कि मधुमेह भएका व्यक्तिहरूले ठिक्क मात्रामा रक्सी र क्याफिन खान्नु पर्छ (किनकि त्यसले दुबै रगतमा चिनीको मात्रालाई असर गर्न सक्छ) र सन्तुलित खाना खानु वा फाइबर, प्रोटिन, र बोसो दिनको हरेक hours देखि hours घण्टामा खानु पर्छ।
कम कार्ब आहारहरूको बारेमा के हुन्छ?
कम कार्ब र शून्य कार्ब आहार विगतका धेरै वर्षदेखि तातो भएको छ। हजारौं व्यक्तिहरू एटकिन्स डाईटमा र (र कहिलेकाँही बन्द) कुद्दछन् केटो आहार bandwagons। केहि मानिसहरु उनीहरुको शपथ खान्छन्, यद्यपि निश्चित अध्ययन सम्पूर्ण समाहित पोषण काट्नेको दीर्घकालीन खतराहरू देखाईएको छ।
जब मधुमेह आउँछ, कार्बोहाइड्रेट गणनाले वजन घटाउन सजिलो र अधिक प्रभावकारी पनि बनाउन सक्छ, मोस्कोभिट्ज भन्छन्। तर जहाँ कार्ब गणना अक्सर सहयोगी हुन्छ, कार्ब हटाउने जहिले पनि उत्तम दीर्घकालीन विकल्प हुँदैन। यो सहि खाने बारे बढी हो कार्बोहाइड्रेटको प्रकार सही मात्रामा। परिष्कृत, समृद्ध कार्ब्स जस्तै सेतो रोटी, बेक्ड सामान, र चिनीले रगत ग्लुकोजमा द्रुत स्पाइक पैदा गर्न सक्छ। जटिल कार्ब्स र सम्पूर्ण अन्नहरू, फलहरू, र तरकारीहरूबाट फाइबरहरू भाँच्नको लागि लामो समय लिन्छ, स्पाइकलाई रोक्न।
मेलोक्सिकैम बनाम आईबुप्रोफेन: भिन्नता, समानताहरू, र जुन तपाईंको लागि उत्तम छ
Vicodin र hydrocodone बीच के फरक छ?
कसरी ओछ्यानमा प्रदर्शन चिन्ता कम गर्न
के हुन्छ यदि तपाइँ ल्याक्टोज असहिष्णु हुनुहुन्छ
जब एन्टिबायोटिक्स लिने कसरी एक खमीर संक्रमण लाई रोक्न को लागी
escitalopram को लागी ब्रान्ड नाम के हो?